नि,र्णय नमाने अध्यक्ष ओलीमाथि अ,नुशासनको का’रबाही गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ : उर्मिला अर्याल…हेर्नुहोस!::Point Nepal
नि,र्णय नमाने अध्यक्ष ओलीमाथि अ,नुशासनको का’रबाही गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ : उर्मिला अर्याल…हेर्नुहोस!
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र बामदेव गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयले सरकार र पार्टीबीच वाक यु’द्व नै चलेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले बामदेवलाई रा,ष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने नि,र्णय गरेको थियो । नि,र्णय गरेको केही घण्टा बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको नि,र्णय नमान्ने बरु परिस्थितिको सामना गर्ने भन्दै ठाडै चुनौति दिएपछि सरकार र पार्टीबीच अ,घोषित यु’द्व चलेको हो ।
पार्टीको निर्णय अध्यक्षले नै नमान्ने भनेपछि अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीले कस्तो का,रवाही गर्छ ? नेकपाको अबको राजनीतिले कस्तो कोर्स बदल्ला भन्ने आम चाँसो र चिन्ता रहेको छ । यसै बिषयमा खबर डबलीको तर्फबाट गणेश पाण्डेले नेकपा स्थायी समिति सदस्य उर्मिला अर्यालसँग कुराकानी गरेका छन्। उर्मिला अर्यालसँग नेकपाभित्रको वि,वादबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेकपाभित्र बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र सचिवालयबीच ग,म्भिर म,तभेद उत्पन्न भएको छ । यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
पार्टीले रा,ष्ट्रियसभामा चुनाव हा,रेकालाई पहिल्यै कसकैलाई पनि लान हुने थिएन । चु,नाव लडिसकेपछि हा,रजित हुन्छ नै । म आफै पनि चुनाव हा,रेको व्यक्ति हुँ । चुनाव हा,र्यो भन्दैमा कसैलाई पनि अ,पमान गर्ने र हिनता बो,ध गराउने काम गर्नुभएन ।
यदि चुनाव हारेकै कारण बामदेवलाई सदस्य बनाउन नहुने भए नारायणकाजीलाई किन बनाएको भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ? कि त गलत नजिर स्थापित गर्न हुने थिएन, कि त सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्नु स्व,भाविकै हो ।
अर्को कुरा बामदेवलाई रा,ष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने पार्टी सचिवालयले सर्वसम्वत नि,र्णय गरिसके पछि प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्छ । यो ओली स,हितको बैठकले गरेको नि,र्णय हो । यदि उहाँको कुनै अ,सन्तुष्टि भएको भए त्यतिबेलै अ,सहमति राख्न सक्नुहुन्थ्यो ।
त्यसो किन गर्नुभएन ? अहिले आएर उहाँले नि,र्णय मान्दिन भन्न पाउनुहुन्न । झलनाथ प्रधानमन्त्री भएको बोलामा उहाँले कसरी खेद्नु भएको थियो ? अहिले उहाँलाई कसैले सरकारबाट ह,टाउने कुरा गरेको छैन । ब,दलाको भावनाले होइन, बदलिएर उहाँले सोच्ने कुरा हो । मुलुकमा अहिले जसरी बाँस्कोटा प्र,करण, य,तिकाण्ड प्र,करण, ललिता निवास जग्गा प्र,करणलगायत धेरै कुरा आइरहेको छ तर पनि उहाँलाई ह,टाउने कसैले भनेको छैन । अहिलेको अवस्थामा बामदेवलाई रा,ष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा वि,रोध उ,हाँकोलागि दु,र्भाग्य हुने छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कतिपयले दम्भ बोकेको जि,द्धि स्वभाको व्यक्तिकोरुपा चि,त्रण गरेका छन् वास्तवमा तपाईको विचारमा उहाँ कस्तो व्यक्ति हुन् ?
चु,नाव हारेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नै बनाउने कुरामा म पनि सहमत छैन । त्यस्तो काम गर्नै हुन्न । त्यो संविधानको म,र्मवि,परितको काम हो । यसमा पार्टीका नेताहरुले पनि बुझेको हुनुपर्छ । यसो भन्दैमा सरकारले कुनै निकायमा नियुक्ति गर्न नहुने भन्ने हुदैन । पार्टीले आवश्यक ठानेमा संविधान र ज,नभावनामा ग,म्भिर ठेस न,पुग्ने गरी नि,र्णय लिन सक्छ ।
पार्टीको लागि बामदेवले धेरै यो,गदान गर्नुभएको छ ।
बामदेवलाई रा,ष्ट्रियसभामा लैजान पहिले ओलीलेनै प्रस्ताव गरेका हुन् । अहिले उहाँलेनै अ,नुमोदन गर्दिन भन्नुभएको छ । पार्टीमा युवराज खतिवाडाको के यो,गदान रहेको छ ? उहाँलाई काखि च्या,प्नु पर्ने के कारण छ ? ग,र्भनरबाट रा,जिनामा दिन पाएको छैन, योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका छन् । उपाध्यक्षबाट रा,जिनामा दिन पाएको छैन मन्त्री भएका छन् । यो के हो ? यो देशमा सक्षम अरु बु,द्धिजिवि छैनन् । प्रधानमन्त्रीलाई मनलाग्दा जे पनि गर्न हुने । स,चिवालयले गरेको नि,र्णय मान्न नहुने ?
प्रधानमन्त्री ओलीले बामदेवलाई रा,ष्ट्रियसभामा लैजाने सचिवालयको नि,र्णय आफुलाई घे,राबन्दी गर्न बनाइएको ष,ड्यन्त्र हो भनिरहेका छन् नि यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
बामदेव रा,ष्ट्रियसभामा नगएपनि प्रधानमन्त्रीलाई सिध्याउन के गाह्रो छ ? पार्टीले चाहेको ख,ण्डमा जु,न सुकै बेला पनि उहाँ सिध्दिनु हुन्छ । यस्तो पनि सोच्ने हो । उहाँ आफै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पार्टीको नि,र्णबाट मन्त्री बन्ने हो ।
प्रधानमन्त्री बन्ने हो । प्रधानमन्त्रीय प्र,णाली भएपनि पार्टीले मन्त्रीको उम्मेद्वार नपठाएसम्म उहाँले नि,र्णय लिन सक्नु हुन्छ ? उहाँ क,म्युनिष्ट पार्टीमा बस्ने, पार्टीको नि,र्णय नमान्ने, वि,धि प्र,कृया मि,च्ने र म,नपरी गर्ने हो भने केहि भन्नु छैन । हैन भने उहाँले पार्टीको नि,र्णय मान्नुपर्छ । सबैले पार्टीको नी,ति सि,द्धान्त मान्नुपर्छ । अ,नुशासनमा बस्नु पर्छ । नत्र भने पार्टीमा अ,राजकताको सुरुवात हुन्छ ।
पहिले राजामाहाराजा पनि एउटा नियममा बसेका थिए । नेताहरु त राजाभन्दा पनि गएगुज्रेका भए । राष्ट्रपतिको अगाडि प्रधानमन्त्रीले घुँ,डा टे,केर टिका लगाउनु क,म्युनिष्ट पार्टीको आ,चरण हो । त्यतिसम्मको वि,द्रुप हुन थालेपछि पार्टीले नि,यन्त्रण गर्नुपर्छ ।
पार्टीभित्र वि,कराल स्थिति आउनुमा प्रधानमन्त्री मात्रै दो,षी देखाएर उम्किन मिल्छ र अरुले जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन ?
यहाँ केपीलाई मात्र म भन्दिन सबै नेतामा क,मजोरी छ । अरुलाई अ,प्ठ्यारो पर्दा लल्दु छा,ड्ने आफुलाई पर्दा हारगुहार माग्ने सोच गलत छ । पार्टीमा विधिर प्रकृया बसाल्ने कुरामा सबैले ध्यान दिएको भए आज यो दिन कसैलाई पनि आउने थिएन । ओलीलाई साँढे बनाउन माधब, बामदेव र झलनाथ सबैको हात छ । पार्टीभित्र विधि र प्रकृया मिचेर मलाई पेल्ने हिसाबले अगाडि बढे पछि त,त्कालिन अध्यक्ष झलनाथलाई मैले भनेको थिएँ कि म रा,जिनामा दिन्छु कि त पार्टीभित्र बहस र छलफलको वाताबरण बनाउनुहोस भनेको थिएँ । मेरो कुरा कसैले पनि सुनेन र मैले बाध्य भएर पार्टी छोडें ।
मन्त्रिपरिषदको प्रमुखको हिसाबले कसलाई नियुक्ति गर्नेनगर्ने विषय उहाँको स्वविवेकको कुरा हो । दलीय सिस्टममा दलको नि,र्णय पनि मान्नु पर्ला । सरकार र पार्टीबीचको द्वन्दले झनै अ,प्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना होला नि त । तपाईको वि,चारमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
पहिला मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हु,नेबेलामा हरेक विषयमा पार्टीभित्र छलफल बहस हुन्थ्यो । निर्णय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएर जान्थ्यो । तर, अहिले सिस्टमै विग्रिएको छ । पार्टी ठुलो भएर सचिवालयले टुंग्याउने भनिएको छ । त्यो पनि गलत छ । पार्टीको निर्णय मान्दिन भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । सचिवालयको नि,र्णय पार्टी अध्यक्षलनै न,मान्दा झन अ,राजकताको स्थिति पैदा हुन्छ । यदि उहाँले निर्णय मान्नुभएन भने पार्टीले अ,नुशासनको का,रवाही गर्नुपर्छ । उहाँले पार्टीको नि,र्णय बाहिर जान्छु पाउनुहुन्न ।
मलाई कुनै कुराको पनि लालसा छैन । मैले जहिले पनि पार्टी सिस्टम वि,परित हुने कामको वि,रोध गरेको हो । कुनै व्यत्तिको वि,रोध गरेको छैन । अरुलाई अ,नुशासनको पाठ पढाउने । आफुले जे गरेपनि हुने । त्यसैले आज क,म्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु मा,हाराज र मा,हारानी बन्न थालेका छन् । त्यो वि,जारोपणको नि,यन्त्रण पहिल्यै गर्दै आएको भए आज यो दिन आउने थिएन । सिस्टम भत्किदै गयो । चा,कडि र चा,प्लुसी बढ्दै गयो ।
कार्यकर्ता पनि नेताको पछिपछि लाग्ने भए । मन नमिले गुट बनाउने, फाइदा भए घाँटी जो,ड्ने प्र,वृत्ति हा,वी भयो । क,म्युनिष्ट पार्टीमा यस्तो हुन्छ ? यसमा सबै नेता सच्चिनु पर्छ । म केपीलाई मात्रै भन्दिन । माधब, झलनाथ, प्र,चण्ड सबै सचिच्नु पर्छ । पार्टीमा आ,ग्रह पू,र्वाग्रह भएर होइन । नीति, प्र,कृया, प,द्धतिबाट चल्नु पर्छ । अ,टेरी गर्ने, पार्टी प,द्धतिलाई ल,त्याउने, द,म्भ देखाउने, अ,राजकता नि,म्ताउने द,ण्ड हि,नतालाई प्रसय दिने काम हुन्छ भने जोसुकैलाई पनि पार्टीले द,ण्डित गर्नुपर्छ ।
अ,न्त्यमा, पछिल्लो समय तपाईको पार्टीका नेताहरु आर्थिक, साँस्कृतिक, नै,तिक वि,चलन बढ्दै गएको देखिदै गएको छ । यसले पार्टीलाई अ,प्ठ्यो पार्दैन ?
पछिल्लो समय नेताहरुका देखिएको विचलनले नेतालाईमात्र होइन पार्टीलाई नै सि,ध्याउँछ । अहिलेको अवस्थामा नेताहरुको जुन लोकप्रियता थियो त्यो घ,टेको छ । त,त्काल चु,नावमा जाने हो भने हाम्रो स्थिति धेरै न,राम्रो भएको छ । यतातर्फ हाम्रा ने,तृत्वको किन ध्यान गएको छैन ? बाहिरबाट सबैले हामीलाई हेरिरहेका छन् । मानिसमा विभिन्न आ,क्रोस, पी,डा छ । हामी क,म्युनिष्टले भा,षणमात्र गर्ने विषय होइन । त्यसलाई का,र्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
श,क्तिशाली चीनका रा,ष्ट्रपति सीले ती,नचारजना व्यक्ति लिएर हिडेका देखिन्छ । हामीकाँहा हुलका हुल बाधेर हिडिरहेका छन् । दु,नियाँभरिको खर्च, गाडिको ला,वालस्कर यो राम्रो विषय होइन । व्यक्तिको बर्थ डे मानउनसमेत तीन वटा हेलिकप्टेर चार्टर गरेका छन् । यो आ,डम्बर र रा,जसी ठाँट बाहेक केहीन होइन । क,म्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुमा अ,सोभनीय कार्य, म,नपरी त,न्त्र बढ्दै गएको छ । यो उ,न्मादलाई बेलैमा नि,यन्त्रण गर्न स,किएन भने पार्टी नै स,माप्त गर्ने छ ।
एमसीसीको वि,रोध नगर्न प्रचण्डले कार्यकर्तालाई दिए निर्देशन…हेर्नुहोस।
यदि संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा फैसला नगरे सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीशहरुलाई जनताले थुतेर सडकमा ल्याउने छ्न : रामकुमारी झाँक्री
प्रचण्डवि,रुद्ध मु,द्दाको सुनुवाइ आज, कस्तो आउँदैछ फैसला ?
जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन गर्नका लागि छिट्टै जनकपुर आउँछुः प्रम ओली
ओलीले किन रोजे नारायणहिटीको आँगन ? के ओलीले राजतन्त्र फर्काउने संकेत दियका हुन् ?…पूरा पढ्नुहोस।